Holtop DC Inverter DX Qaybta Qabashada Hawada
Taxanaha HTTOP HFM DX Qaybta Qabashada Hawada waxaa ka mid ah DC Inverter DX qaboojiye unugga bannaanka iyo joogtaynta joogtada ah ee DX
Qalabka banaanka ee hagaajiyaha labadan taxane. Awoodda DC inverter DX AHU waa 10-20P, halka awoodda soo noqnoqoshada joogtada ah
DX AHU waa 5-18P. Iyadoo lagu saleynayo soo noqnoqoshada joogtada ah ee DX AHU, horumarka cusub ee DC Inverter DX AHU wuxuu korsadaa uumiga la xoojiyay
tiknoolajiyada duritaanka si loo furo waagii cusub ee kululaynta heerkulka hooseeya. Naqshad cusub ee nidaamka hawo-qaboojinta iyo is-horumarsan
barnaamijka xakamaynta wuxuu siinayaa ciyaar buuxda waxqabadka sheyga wuxuuna u keenayaa dadka isticmaala khibrad hawo qaboojin badan.
Qaybaha Maareynta Hawada ee Warshadaha
Warshadaha AHU waxaa si gaar ah loogu talagalay warshad casri ah, sida Automotive, Electronic, Spacecraft, Pharmaceutical iwm Holtop waxay bixisaa xalka lagu maareeyo heerkulka hawada gudaha, huurka, nadaafadda, hawo nadiif ah, VOCs iwm.
Holtop Qaybsan Hawo qaboojiye Chiller Oo leh saar Heat
Holtop Modular Air Cooled Chillers waa badeecadeena ugu dambeysay ee ku saleysan in ka badan labaatan sano oo cilmi baaris joogto ah & horumarin, isku soo aruurinta tikniyoolajiyadda iyo khibrada wax soo saar taasoo naga caawisay inaan horumarino qaboojiyeyaal leh waxqabad xasiloon oo lagu kalsoonaan karo, si aad ah u hagaajiyay uumi bixiyaha & kuleylka wax ku oolka kuleylka. Sidan oo kale waa doorashada ugu fiican ee lagu keydiyo tamarta, ilaalinta deegaanka loona gaaro nidaam qaboojiye raaxo leh.
1. Qabashada iyo dilka fayraska oo leh hufnaan sare. Ka saar H1N1 in ka badan 99% hal saac gudahood.
2. Cadaadis hooseeya oo leh 99,9% heerka sifeynta siigada
3. Ku rakibida nooca qorista qol kasta iyo meel ganacsi
Nidaamka kuleylka kuleylka ee lagu buuxiyo si loo gaaro soo kabashada tamarta badan iyo waxtarka sare; Waxay u kici kartaa iyada oo ah qaboojiye hawo cusub xilliga macaamil ganacsi, lamaane wanaagsan oo leh nidaamka qaboojiyaha; Xakamaynta joogtada ah iyo uumiga ee hawo nadiif ah, oo leh xakamaynta uruurinta CO2, gaaska waxyeellada leh iyo nadiifinta PM2.5 si hawo nadiif ah looga dhigo mid raaxo leh oo caafimaad leh. Feature ee nooca taagan Heerkulka Tamarta Heat Recovery Ventilator:
Muraayadaha Afka Muraayadda Afka Muraayadda
Naqshadeynta Qaybta Xasaasiga ah ee Kiiska AHU;
Naqshadeynta Module-ka caadiga ah;
Tiknoolajiyadda Muhiimka ah ee Soo kabashada Kuleylka;
Qaabdhismeedka Aluminium Aluminium & Nylon Cold Bridge;
Labada Guddi ee Maqaarka ah;
Qalabka jilicsan ee la heli karo;
Waxqabadka sare qaboojinta / kululaynta biyaha;
Isku-darka miirayaasha badan;
Taageero tayo sare leh;
Dayactir badan oo haboon.
Qaybta qaboojinta hawadu waxay ka barbar shaqeysaa munaaradaha qaboojinta iyo qaboojinta si ay u wareejiso una ilaaliso hawada iyada oo loo marayo habka kuleylka, hawo-qaboojinta, iyo qaboojinta ama qaboojinta. Maamulaha hawada ee cutub ganacsi waa sanduuq weyn oo ka kooban kuleylka iyo qaboojinta gariiradda, afuufa, raajooyin, qolal, iyo qaybo kale oo ka caawiya hawo-hayaha shaqadiisa. Maamulaha hawadu wuxuu kuxiranyahay marinka marinka hawaduna waxay ka soo gudubtaa qaybta maareynta hawada ilaa marinka marinka, ka dibna ...